Mpanamboatra Laser Tube ambongadiny sy mpamatsy | Yandoon
Laser sokitra sy milina fanapahana
Mpitrandraka bozaka AGFK
ATV mpitrandraka bozaka
Mpitrandraka bozaka EFGC
Mpanam-bozaka fitsinjaram-bokatra KDK Manual
Mpitrandraka bozaka fitsangatsanganana Hydraulika KDK
KDK Hydraul Sarafift Disc Mower
Masinina fandevenana vato
Tube Tube, anarana feno: fitaratra voaisy tombo-kase tamin'ny laser laser. Noho izany, dia matetika fantatra amin'ny firafitry ny fantsom-laser.
Fitsipika miasa: ny fivoahan'ny herinaratra avo lenta dia mampihetsi-po ny gazy CO2 mahery hamokarana laser miaraka amin'ny halavan'ny 10,6um.
Firafitry ny firafitra
Izy io dia mazàna indrindra amin'ny vera mafy, lava-kavoana ary electrode.
1. Ampahany fitaratra mafy; Ity ampahany ity dia misy fantsom-pivoahana, palitao fanamafisana rano, palitao fitehirizana rivotra ary fantsom-pamokarana rivotra vita amin'ny fitaovana GG17. Nasiana tombo-kase CO2 laser matetika manana firafitra casing telo sosona. Ny sosona anatiny indrindra dia ny fantsom-panafahana, ny sosona afovoany dia ny tanany fanadiovana rano, ny sosona ivelany indrindra dia ny kitapo fitehirizana entona, ary ny fantson-drivotra miverina amin'ny rivotra dia ampiasaina hampifandraisana ny fantsom-panafahana sy ny fantson-tsolika.
2. Fizarana resonator: ity ampahany ity dia misy fitaratra feno sy fitaratra famoahana. Ny fitaratra manontolo an'ny resonator dia matetika miorina amin'ny vera optika ary mifono sarimihetsika volamena. Ny fitaratry ny fitaratra sarimihetsika volamena akaikin'ny 10.6um dia mihoatra ny 98%; Ny fitaratra famoahana ny resonator dia amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny germanium (GE), fitaovana infrared izay afaka mamindra taratra 10.6um, izay rakotra sarimihetsika diélectric multilayer.
3. Ampahany elektroda: laser laser mazàna dia mandray cathode mangatsiaka miaraka amin'ny endrika silindrisy. Ny fisafidianana ny fitaovana cathode dia misy fiatraikany lehibe amin'ny androm-piainan'ny laser. Ny fepetra takiana fototra amin'ny fitaovana cathode dia: ny tahan'ny sputter ambany sy ny tahan'ny fifoka entona,
Ny fepetra manokana sy ny maodelin'ny fantsona laser dia mifototra amin'ny herin'ny laser.
Modely mahazatra: 15W, 25W, 40W, 60W, 80W
Ny fantsom-by laser misy heriny samihafa dia mizara roa ny halavany. Ohatra, ny halavan'ny fantson'ny laser 60W dia 1200mm na 1250mm, ary ny halavan'ny fantsom-by laser 80W amin'ny ankapobeny dia 1600mm
Ny fantsom-by laser dia ampiasaina amin'ny fitaovana fanodinana laser CO2. Toy ny milina sokitra tamin'ny laser, milina fanapahana laser, milina marika laser, sns.
Fahombiazana sy fahasamihafana
1. Fiainan'ny serivisy: satria ny fantsom-by laser dia azo ampiasaina amin'ny milina fanoratana laser, ny fiainam-panompoana no lasa fividianana manan-danja indrindra ho an'ireo mpampiasa. Ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana fanompoana dia noho ny teknolojia fanodinana sy ny haitao famolavolana. Amin'ny ankapobeny, ny androm-piainan'ny fantsom-by laser eto an-toerana dia eo amin'ny 1500 ora (60W ohatra).
2. Angovo laser: ny hazavana maivana indrindra amin'ny fantsom-by laser misy fampisehoana samihafa dia samy hafa.
3. Kalitaon'ny spot: ny natiora dia azo faritana amin'ny alàlan'ny maody fantsom-by laser. Ny kalitaon'ny toerana maivana dia voafaritry ny rohy maro amin'ny fizotry ny famokarana. Ny kalitaon'ny toerana maivana dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny mpampiasa.
4. Fiorenan-toerana: ny vokatra tsy mahomby amin'ny fampisehoana dia mora tohanan'ny rivotra, tsy fipoahana ivelany sy olana hafa amin'ny resaka fitoniana.
1. Tsy maintsy ampiasaina amin'ny toetry ny rano mangatsiaka tsara.
2. Ny famatsiana herinaratra laser miaraka amin'ny fampisehoana azo antoka dia tsy maintsy omena.
3. Ny tariby dia hasiana insulated azo antoka.
Teo aloha: Herin'ny laser
Manaraka: Laser Lens